Noma ama-nerds obhiya angafunda okuthile kuhambo lwebhasi le-Bitter Minnesota-News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Ngisho nama-nerds obhiya angafunda okuthile ohambweni lwebhasi le-Bitter Minnesota
Isikhathi: 2020-07-10 Amazwana: 10
Futhi kubantu abasha endaweni yobhiya wobuciko, noma mhlawumbe labo abangachazanga isikhathi esiningi edolobheni elilodwa noma elinye (isevisi isebenza eMinneapolis naseSt. Paul), ngicabanga ukuthi kufanelekile isikhathi nemali.
Abaqondisi bezokuvakasha bakushayela wena neqembu elincane labathandi bakabhiya ebhasini lesikole elihlaza okwesibhakabhaka uye ezindaweni zokuphuza utshwala, lapho ungaphuza khona okuningi noma okuncane ngendlela othanda ngayo - bonke ubhiya bufakiwe nalolu hambo.
Amathikithi angama- $ 75 umuntu ngamunye, okungabonakala kukhuphukile uze ucabangele izindleko zokuhamba phakathi kwalezo ziphuzo, uma kungakuhle uzihlelele ngokwakho, kungalingana okungenani uhhafu wentengo yamathikithi. Uma ungumuntu ophuza ngokulinganisela futhi uneziphuzo ezimbalwa ezimbalwa endaweni ngayinye yokuphisa utshwala, izindleko zibuyiselwa kalula.
Uhambo lwethu lwangoLwesihlanu ebusuku lusuke ku-6 laya ku-9 pm, futhi ngoba sihambise i-Uber endaweni yokuqala yokuphisa utshwala, sandise ubusuku bethu ngokumane siphume ezintweni zokuhamba sibuyele endaweni yokulanda. Vele, ubhiya esibuphuzile ngemuva kuka-9 pm bebungeziwe, kepha njengoba besinenqwaba emahoreni ambalwa adlule, lokho kube ngamadola ambalwa nje.
Ibhasi lilanda amakhasimende kwenye yezindawo ezimbalwa eziqokiwe ngaphambi kokuya endaweni yokuqala yokuphisa utshwala, kithi, iModist.
I-Modist, indawo yokuphisa utshwala entsha eyenza ubhiya ovame ukuphuma ngaphandle kwebhokisi, bekuyisiqalo esihle. Yize sengihambele izindlu eziningi zokuphuza utshwala, angikaze ngilichithe ithuba lokubona ukuthi iyiphi indawo ekhiqiza ubhiya ehlela inqubo yabo ngendlela efanelekile. Endabeni yeModist, benza ubhiya ngendlela engisazama ukugoqa ikhanda lami ngayo. Ngaphandle kokuthola ubuchwepheshe obuningi, iningi lezindawo zokuphisa ligaya okusanhlamvu kwalo kepha lishiye likhululekile. I-Modist igxobhoza eyabo futhi ithumele imash ngesihlungi esinqenqemeni, esifana nekhodiyoni, ukuthandwa kwaso kuvame ukubonwa ekuphekeni okukhulu kakhulu.
Le nqubo isebenzisa amanzi amancane kakhulu, futhi ibuye ivumele indawo yokuphisa utshwala ukuthi isebenzise okusanhlamvu ongajwayele ukubuthola kubhiya, njengelayisi nesipelingi, futhi nokusebenzisa inqwaba yezinhlamvu ezithile ezivame ukuvimba izinhlelo zendabuko, njenge oats.
Sizamile izinyosi ezimbalwa enkabeni yedolobha iMinneapolis, kufaka phakathi i-funky, ephefumulelwe iTiki Level Tropic: Blue kanye nobhiya owenziwe ngensalela iRise Bagels.
Besingazange siye endaweni yokuphisa utshwala elandelayo, i-Broken Clock, efihlwe endaweni yezimboni kakhulu eNortheast Minneapolis. Ubhiya obukhona lapho bube nokudumaza okuncane ngemuva kokuvakashela iModist, kepha akuzange kusivimbe ekuhloleni imenyu nasekutholakaleni i-cherry-key lime gose esasijabulela sonke.
Ukuma kokugcina ohambweni lwethu kwakungenye yezindawo zokupheka utshwala engizithandayo, iFair State. Umfelandawonye ophisa utshwala uhlale unokuthile okujabulisayo nokusha, futhi amafulegi abo nawo aqinile. Sasampula phakathi kwemenyu, sathola i-pilsner eyodwa ebhemayo esivele ingekho kwimenyu, kepha futhi sithokozela i-kettle-soured, i-hibiscus-infusion saison, i-Roselle. Kwakukhona nohlobo olufaka ukufaka amanye amajikijolo.
Ngenxa yezingqinamba zesikhathi, ukuvakasha kwe-brew house bekutholakala endaweni eyodwa kuphela (Modist), kepha ngenxa yokuthi kungenzeka ukuthi olwabo luthakazelisa kakhulu, asikunakanga lokho.
Uhambo lufaka ukudla okulula (izikhwama zamashipsi nama-pretzels) namanzi, okuyinto enhle ukuba nayo ebhasini. Uma ufuna ukudla elolini lokudla, kuzodingeka ukhokhele lokho ngokwakho. Siyalile ukuthi izoso kusuka eMinnesota Barbecue Co zilethwe eFair State, obekungukukhetha okuhle. Ngenye yezindawo ezimbalwa lapho indawo entsha esebenzisana neTravail, ehanjiswa khona kuphela eletha kuyo.
Previous: Ubhiya Wobuchwepheshe
Okulandelayo: Abathengi baseThailand bavakashele i-COFF